Naninona Rajao no resy be? | Hevitra MPANOHARIANA |
Naninona Rajao no resy be?
2018-11-09 @ 20:43 in Politika
Zavatra vitsivitsy no azo marihina amin'izao aorian'ny fifidianana ho filoham-pirenena teto Madagasikara taona 2018 izao. Ny zavatra lazaina eto ka nanaitra ny besinimaro dia ny isambato sy ny isanjato kely azon'ny filoham-pirenena farany teto amin'ny firenena, Atoa Rajaonarimampianina Rakotoarimanana Hery Martial, tsy nampoizina tokoa ny vokatra izay tena kely dia kely tokoa raha jerena tamin'ny naha-filoham-pirenena azy ka mahalasa ny eritreritra hoe inona no mahatonga izany vokatra ratsy dia ratsy izany?---
Président sortant #Rajaonarimampianina qui dénonce la fraude à son propre scrutin aurait dû prêter + attention au sondage Friedrich Erbert @FES_EU au lieu d’essayer de l’interdire. Il était déjà à 4%.
Par contre, ils ont sous estimé le poids des 2 premiers. pic.twitter.com/2ydbG77uvn
— Guillaume Lafargue (@GuiLafargue) November 9, 2018
Tena ratsy dia ratsy mihitsy angaha ny fitantanana nataony no sazian'ny safidim-bahoaka izy? Sa tsy nanao na inona na inona mihitsy izy nandritra ny fotoana nitondrany? Mba mieritreritra ihany ny tena hoe tsy mendrika ny zavatra nataony sy vitany kosa ilay isam-bato azony. Nisy ihany ny tanàna na renivohi-paritany teo aloha nananganana foto-drafitrasa, ary mba nanantena ihany izy hoe hahay hankasitraka ny zava-bitany ny tao amin'ny tanànan'i Fianarantsoa sy ny manodidina, satria heveriko fa tao no anisan'ny nomena tombondahiny manokana amin'ireny foto-drafitrasa ireny. ---
Azo singanina ihany koa fa nandritra ny fotoana nitondrany no nananganana ny fanitarana ny seranam-piaramanidina iraisampirenena eo Ivato sy ny fanitarana ny trano goavana mifandraika amin'izany. Fotodrafitrasa tsy maintsy natao izany satria io no vavahadin'i Madagasikara misokatra amin'ny any ivelany, nefa efa kely loatra sy toa zary efa nilaozan'ny toetr'andro ny fotodrafitrasa misy amin'izao fotoana izao. ---
Etsy ankilany, tsy lavina fa misy ny foto-drafitrasa noheverina ho reharehan'i Madagasikara tamin'ny nandraisana ny fihaonana an-tampon'ny Fikambanana miteny manontolo na ampahany ny teny frantsay. Nisy ny fotodrafitrasa natsangana, toy ny Village Voara (dobla V), saingy tsy vita hatramin'ny farany ny fananganana io toerana io ka zary henatra ho an'ny firenena, ny trano fandraisam-bahiny mihaja "an'olon-tsotra" ao Ivato indray no vita tsara sy natao handraisana ireo delegasiona avy any amin'ny firenena maro. Mifanila amin'izany ihany koa ilay lalana mampitohy an'Ivato Seranana amin'Isoavimasoandro izay nanify loatra ny tara natao taminy sady tonga dia lavadavaka be raha vao nandalovan'ny orana indray mandeha monja. Asa kitoatoa ka niteraka fahatezerana ho an'ireo nahita izany. ---
Tsy adinoina ihany ny ny tantara nanafintohina tamin'ny 'carte grise' sy 'permis' lazaina fa "biometrique" izay naloa tamin'ny vidiny lafo dia lafo. Efa nitaraina ireo nahatsikaritra fa tsy misy izay maha-"biometrique" ireo zava-droa loha ireo saingy norahonana ny hogadraina fa manakorontana ny fiainam-bahoaka. Kanjo Malagasy iray monina tany Etazonia, nilaza fa tsy izy ary tsy "biometrique" mihitsy ireo taratasy roa ireo, dia mody nolazaina fa misy rindrambaiko manokana mamaky ny zava-boasoratra ao anatiny. Ny zatra zavatra "biometrique" mahafantatra avy hatrany fa misy zavatra tsy milamina matoa tsy namoaka na inona na inona rehefa tarafina ilay kaody QR maha-biometrika ny biometrika. Efa hifarana ny fehim-potoana fiasana vao niaiky fa hay tsy nilamina tokoa ireo taratasy nosandaina volabe ny nanaovana azy, sady nandaniam-potoana lava dia lava. Alahelon'ny olona tany anaty ireny ka tany amin'ny fandrotsaham-bato ny olona no nanasazy ireo mpitondra voasaringotra tamin'ireo raharaha ireo ka niezaka ny hirotsaka hofidiana. ---
Lesona ho an'ny mpitondra manaraka io toe-javatra io fa ny tsy tokony hohadinoina dia kandidà nanoloana olona hafa tsy navela hirotsaka io rangahy iray nitantana an'i Madagasikara tao anatin'ny dimy taona latsaka io. Nanjary anaram-bositra azony nandritra ny fotoana nitondrany ny hoe "Rajaonarimampiesona". Saingy tamin'ity fifidianana ity ihany koa no nahitana hoe raha nampiesona izy dia nisy kandidà iray mbola "original" kokoa tamin'ny fampiesonana... ary ny tanora sy ny midoka tena ho mbola tanora no tena roboka sy sodòkan'ny fampiesonana ataony, saingy avelao ho tantara manaraka indray ny amin'izay...